Sunlight Lemon Dishwashing Liquid 1.5kg – SUNNY eSTORE
Sunlight Lemon Dishwashing Liquid 1.5kg
ဆီနှင့် အညစ်အကြေးများကို မြန်ဆန်လွယ်ကူစွာဆေးကြောနိုင်သည့် Sunlight Lemon ပန်းကန်ဆေး ဆပ်ပြာရည်
Sunlight Lemon ပန်းကန်ဆေး ဆပ်ပြာရည် ကိုစိုစွတ်သောရေမြှုပ်တစ်ခုထဲသို့ထည့်ပြီး ပေနေသည့်အိုးခွက်ပန်းကန်များကို ပွတ်တိုက်ပါ။ အထူးသဖြင့် အမဲဆီ သို့မဟုတ် ဖုန်အစွန်းအထင်းများရှိသည့်နေရာတွင် ပိုမိုပြင်းထန်စွာပွတ်တိုက်ပါ။ပြီးနောက်ရေနှင့်ဆေးပါ။
Anionic detergents, solubilisers, colorants and perfume.
မျက်လုံးအနီးတဝိုက်နှင့် ထိတွေ့မှုကိုရှောင်ကျဥ်ရန်။ ထိတွေ့မှုရှိပါက ရေဖြင့်လျင်မြန်စွာ ဆေးကြောသန့်စင်ရန်။
Faster Degresing Power Clean Effectively
Sunlight Lemon with lemon extract and natural mineral salt in each drop, helps to clean grease with the power of 100 lemons, bring natural fragrance, clean dishes and no odor, at the same time very gentle, nourish your hands. The product is twice as powerful as the grease, baking disinfectant, which is 100 times better than ordinary dishwashers and protects the health of the family.
Put Sunlight Dish wash intoawet sponge
Clean with this sponge onto utensils
Finally, Wash away with clean water
Faster Degreasing Power Clean Effectively
Includes Sunlight Lemon Dishwashing Liquid 1.5kg